एकलव्य जी नेपालमा गएर दौतरीमा झुल्किन भएको मा धन्यबाद।
खास पत्रिका पढ्न मिस भएको भए तपाइले भनेका कुरा पढ्दा नेपालको घटना क्रम तथा स्थीती पुरा प्रष्टाउंछ।
योजना आयोगको नौटंकी त थाहा पाको थिइन, तर सुन्दा अचम्मै लाग्यो। रामहरीको कुरा त सबैले थाहा पाएकै हो, मान्छे मार्ने यि जन्तुले एक जनाको हत्यारालाइ के कारबाही गर्लान? स्कुललाइ ट्याक्स लगाउनु त ठिकै हो तर त्यसले के कती असर पर्छ त्यो हेरीनु पर्छ किन की प्राइभेट स्कुल प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता छन।
तर यो योजनै नहुने देशमा भलिबल सर्भिस गर्नेले के योजनाको बल कता पुराउने हुन, अचम्मै लाग्यो!
ऐकोहोरो कुनै न कुनै पक्षतर्फ ढल्किएका 'स्वतन्त्र समाचार माध्यम'का तटस्थ अनलाईन खवर पढिरहेको बेलामा तपाईको अनौपचारिक खवरले यथार्थताको जानकारी दिएको छ।
धन्यवाद र अरु पनि यस्तै जानकारी पाउने आशामा ।
छोटो तथा अनौपचारीक समाचार निकै रमाइला रहेछन। यस्तै रमाइला खबर पढ्दै जान पाऔं। तर मनै बाट यस्ता खाले समचार चाही नेपालबाट कहिले पनि नआओस भन्ने लाग्छ।
१ नं को बूंदामा लेखिएको कुराले स्तब्ध नै बनायो ! गिरिजाले कुनै जमानामा शिशु प्रजातन्त्रको थेगो बोलेर थाक्दैनथे अहिले माओबादिले नया नेपालको थेगो लाई देश तहस नहस पार्ने भांडो बनाउंदैछ । योजना आयोगका लागि योजनाविद हैन कि त रबर स्टाम्प चाहिएको हो कि बेरोजगार र आवारालाइ जागिर खुवाइएको हो बुझ्न सकिएन ।
बरु छापामारलाई बाड्ने भनिएको सर्टिफिकेटहरु लिएर योजना आयोगमा छिरे कि सबै डाक्टर साहेब हरु !
“ हिंसा गलत थियो भन्ने कुरालाई माओवादीले कहिल्यै स्वीकारेन बरू त्यसैका कारण आँफू यो स्थतिमा आएको कुरामा उसले गर्व महशूस गरेको छ” भन्ने कमल थापाको भनाइ सत्य हो ।
कमल थापाको मुखबाट निस्केको कुरा असत्य हुनै पर्छ भन्ने छैन र प्रचण्डको मुखबाट निस्केको सबै सत्य हुने भन्ने शक्तिखोरका कामरेडहरुले पनि पत्याउन छाडे होलान् ।
डा बाबुरामले कर छल्नेहरु माथि "आतंक" फैलाउदै छन रे । र अब बैंक ब्यालेन्सको स्रोत खोजिनेवाला छ रे। यो आतंक चाहि राम्रै होला कि !